नेपाल आइडल सकिनै लाग्दा फेरी फकतालुङ्ग आइडल सुरु ,आखिर के हो फकतालुङ्ग आइडल ?(भिडियो सहित ) – Complete Nepali News Portal
नेपाल आइडल सकिनै लाग्दा फेरी फकतालुङ्ग आइडल सुरु ,आखिर के हो फकतालुङ्ग आइडल ?(भिडियो सहित )
September 4, 2017	226 Views
नेपाल आइडल चलिरहदा फेरी अर्को फक्तालुंग नामक आइडल सुरु भएको छ । फकतालुङ्ग सयंगका उपाध्यक्ष गायक प्रविन सेर्माले जनाए अनुसार बिसुद लिम्बु भासामा आधारित एक गायन प्रतिभा हो । लिम्बु गित संगीतमा रहेर लिम्बु गित गाउने प्रतिस्प्रधा रहने हमिअलि गायक प्रविनले जनाएका छन् ।
फकतालुङ्ग आइडलमा सहभागी हुनेले लिम्बु गित गाउनु पर्ने हुन्छ । यो आइडलमा सम्पूर्ण नेपालीले आफ्नो प्रतिभा देखाउन सकिने प्रविनले जनाउनु भयो ।
यो आइडलमा प्रतिस्प्रधीमध्ये प्रथम हुनेलाई नगद १ लाख, कुनै पनि बाहिरी मुलुकको कार्यक्रममा सहभागी गराउने र लिम्बु भाषाका ३ ओटा गित रेकर्ड गराइने प्रविनले जानकार दिनु भयो । यो आइडलका बारेमा अन्य जानकारी बुज्नका लागि तल भिडियोमा हेर्नुहोला ।
भिडियो हेर्नका लागि यहा: